I-Qelasy, ithebhulethi yezemfundo eyenziwe e-Ivory Coast - Afrikhepri Fondation
ngoMsombuluko, Ephreli 19, 2021
I-Qelasy, ithebhulethi yezemfundo eyenziwe e-Ivory Coast
Qi-elasy isho "iklasi" ngolimi lwesi-Akan. Ithebulethi izohloswe emphakathini wezemfundo. Kuyinto ithebhulethi yezemfundo ezohlinzeka isofthiwe namathuluzi abafundi. Izincwadi zokufunda zesikole zezwe ngalinye lapho ithebhulethi izotholakala khona. Ithebhulethi izoba nezindlela zansuku zonke zokuqapha nokuhlolwa komfundi. Lokhu kuzovumela ukusetshenziswa kwamakilasi afundiswa ngabafundisi, abafundi nabazali.
Njengomklami we Qelasy, Thierry N'Douffou, ithebhulethi ngeke ithathe indawo yabafundisi, kodwa iyoba yinkxaso yokusebenzisana. le ithebhulethi yezemfundo Ngakho-ke iQelasy izovumela abazali ukuthi balandele amamaki ezingane zabo. Izosebenza futhi njengencwadi yokubhalela yezincwadi kanye nekhadi lokubika.
Izici zobuchwepheshe zethebhulethi yeQelasy zingokulandelayo
- Izinhlelo zokusebenza: I-Android 4.2 - Isikrini: amasentimitha ayi-8 - Iprosesa: I-Quad-core ye-1 Ghz - Imemori yangaphakathi: 16 GB - Isisindo: 480 amagremu - Ukuzimela: amahora angu-8 - Intengo yokuqalisa: ama-270 euros noma I-180 000 Fcfa
Ithebulethi yezemfundo Qelasy uzobe umelana namanzi nothuli. Abancane bazokwazi ukuba nethebhulethi yabo yonke indawo nakuzo zonke izimo.
Ithebulethi Qelasy izotholakala ngezinhlelo ezintathu: - "Ingane" yabancane abanekhodi yabazali - "Intsha" yentsha - "I-Uni" yabafundi
Uhlelo ngalunye lwethebhulethi yezemfundo luyoba nesofthiwe ethize. Ngaphezu kwalokho, amathuba okufinyelela eminye imisebenzi azovunyelwa, futhi futhi Qelasy uzoba nesitolo sesicelo esinikezelwe.
Izici eziningana zenza i-Qelasy, ithebhulethi ethile. Lokhu kuphakathi kwabanye
• U-Qelasy uchitha phansi okuqukethwe kwesikhwama esikoleni esivumela umfundi ukuba aye ekilasini nazo zonke izincwadi zakhe, izincwadi zokubhala, nezinye izinsiza zemfundo ngaphandle kokuba athathe i-15 kg yemithwalo kodwa ngaphansi kwe-500 g.
• Nge-Qelasy, abazali nabafundisi banokulawula. Bakhetha ukuthi yiziphi izicelo umfundi angakwazi ukufinyelela kuzo, izikhathi lapho umfundi angasebenzisa khona i-Qelasy nokuthi ngabe angavumelekile yini ukufinyelela i-Intanethi namawebhusayithi athile. Umzali noQelasy angalandela amanothi omfundi nganoma isiphi isikhathi kusuka kwikhompyutha yakhe noma ithebhulethi yaseQelasy futhi ahlanganyele nabafundisi.
• Izikole nabafundisi banendlela yokushicilela okuqukethwe kwezemfundo kanye nesiteji sokushintshanisa nabazali.
• I-Qelasy ayinamanzi, engavumelani nesimo sezulu esibi nothuli, abazali bangaqinisekiswa, ngisho nangabe imvula, izincwadi zokufunda nezincwadi zezifundi zigcinwa. Uma kwenzeka ukungcola okunzima kwethebhulethi, ingahlanzwa ngamanzi, ngaphandle kokubeka ingozi, ngaphezu kweQelasy inempilo ebhethri enhle, ukuvumela ukusetshenziswa okunamandla usuku lonke ngaphandle kwenengozi yokuqothulwa.
• I-Qelasy ivikelekile, ukufinyelela kuncike ekukhoneni okugunyazayo. I-Qelasy kuphela engasetshenziselwa ukuthi yiziphi izimvume ezinikeziwe. Ngaphezu kwalokho, i-Qelasy idinga ukuqaliswa kwe-hardware yangaphambi kokunikeza i-tablet i-tablet kuphela umfundi.
• I-Qelasy iyithuluzi lesikole, hhayi ithebhulethi yokudlala. Ivumela ukufinyelela kwezincwadi zamabhuku nezincwadi zedijithali, ezithuthukiswe nge-multimedia nokuqukethwe okuhlangene, inezitolo zayo zokusebenza nesitolo esinikeza kuphela amabhuku, izinhlelo zokusebenza namageyimu wezemfundo
• I-Qelasy iyi-tablet exhunyiwe, ivumela ukufinyelela kwe-3G ku-Inthanethi. Ibuye ikuvumele ukuthi ushayele futhi uthumele imiyalezo, bonke ngaphansi kokulawulwa kahle kwesikole noma umzali. Ngakho-ke, kuvumela opharetha ukuba banikele amaphakheji wezemfundo ahlanganisa izwi, nedatha yokufinyelela imfundo ngokuhamba okuphelele.
• I-Qelasy ayisona nje isibhebhe kepha isisombululo esihlanganisiwe esinikeza izikole nezikhungo inkundla yokuphathwa kwezikole, ukuphathwa kobudlelwano babazali nothisha nokuphathwa kwezikhungo. Ezikoleni, ithembela kunethiwekhi yendawo ukusunduza okuqukethwe kumathebulethi. Uthembele kwi-inthanethi ngokushintshana nabazali
• I-Qelasy ibuye ingosi yabalingani bomphakeli noma umshicileli wokuqukethwe kanye nezicelo zemfundo.
Buka ama-Dreamgirls (2006)
Buka incwadi eluhlaza: emigwaqeni yaseningizimu (2018)